Manova ny filan'ny nofo amin'ny famakiana ho lasa zavakanto | Famoronana an-tserasera
Elizabeth Sagan dia afaka nampiasa an'io boky be dia be io ananany eo amin'ny talantantoky ny tranombokiny midadasika mba hamoronana tolo-kevitra kanto misarika ny sain'ny olona. Tsy noho ny fihetsika napetrany ihany, fa ny fomba nahafantarany ny fomba hisafidianana ny tsirairay amin'ireo boky hamoronana tonony samy hafa rehefa manambatra azy ireo.
Mampiseho koa lny fitiavany lehibe hamaky ary ny fomba nizarany io fitiavana boky io nandritra ny taona vitsivitsy izao tamin'ny mpanaraka azy tao amin'ny Instagram. Saingy io volavolan-kevitra ara-javakanto io no nahavita nametraka azy io ho hitarika sary tena mahaliana sy manaitra.
Nanomboka tamin'ny zarao ireo vakiteny tianao indrindra nifaneraseranao miaraka amin'ny tohatra fitahirizam-bokiny manokana. Rehefa nandeha ny fotoana ary nanandrana zava-baovao aho dia nanjary sarotra sy mamorona kokoa ireo sary.
Inona no nanjary a famoronana lehibe miaraka amina sary marobe tsy mamela olona tsy hiraharaha izany. Ankehitriny izy dia afaka mamorona sangan'asa kanto misy kalitao amin'ireo boky manodidina azy amin'ny endriny samihafa izay averiny am-panaovana fankasitrahana ireo mpanaraka azy maherin'ny 90.000.
Mandeha ireo pose ireo manomboka amin'ny maha zazavavindrano ka hatramin'ny mpiady miady amin'ny dragona. Manoro hevitra anao izahay handalo ho an'ny Instagram mba hahafahanao mianatra momba ny fitiavany sy sary maro hafa izay misambotra ireo sary izay maneho ny fitiavany boky sy famakiana.
Etsy an-danin'izany, manoro hevitra izahay fa jereo ny tranomboky goavambe Shina izay misy boky 1,2 tapitrisa, ankoatry ny fananana maritrano manokana. Manome ny olona hieritreritra ny zavatra ho azon'i Elizabeth atao raha avelany malalaka hamorona azy ny famoronana sy ireo boky an-tapitrisany ireo. Azo antoka fa misy eritreritra liana sy hafahafa hitranga ao aminy mba hampiavaka azy ary maro ny mpanaraka hanaraka azy amin'ny Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fanovana ny tranombokinao midadasika ho tolo-kevitra ara-javakanto
Mpanakanto aostralianina mamerina ny sanganasa malaza an'ny Banksy miaraka amin'i Scratch sy Pike avy amin'ny The Simpsons